कोरोना महामारीले पुनः सुस्तायो नेपाली फिल्म निर्माण « Mero LifeStyle
कोरोना महामारीले पुनः सुस्तायो नेपाली फिल्म निर्माण
सुमित्रा लुईंटेल	|| 20 April, 2021
छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिरहेको बेला नेपालमा पनि यो बढ्दो क्रममा छ । सरकारले भिडभाड हुने कार्य नगर्न तथा विद्यालयहरू पनि बन्द गर्न अनुरोध गरिरहेको बेला चलचित्र निर्माण कार्य भने जारी छ ।
त्यसो त कोरोनाको त्रास झन झन बढ्दै गईरहेको बेला निर्माण कार्य सकेर प्रदर्शनको लागि तयारी अवस्थामा रहेका चलचित्रहरू पनि आफ्नो प्रदर्शन मिति सार्दै बसिरहेका छन् । तर चलचित्र निर्माण कार्य भने रोकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि जोखिम मोलेर कुन कुन चलचित्र निर्माण भइरहेको छ त ?
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीका अनुसार अन्य समयको तुलनामा अहिले निकै कम सिनेमा निर्माण भइरहेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा सिनेमा क्षेत्रमा जोडिएका प्रायःले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा चलचित्रकर्मीहरूले कहिलेसम्म बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने हो भन्ने टुङ्गो छैन । त्यसैले, थोरै लगानी गरेर भए पनि चलचित्र निर्माण गर्नेहरू छन् ।
धेरैले कोरोनाको दोस्रो लहरको त्रासले निर्माण कार्य केही समयलाई पछि सारेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण आफूले हाललाई छायाङ्कन स्थगित गरेको फिल्म ‘हिमानी’का निर्माता माधव वाग्लेले जनाए ।
निर्माण भइरहेका चलचित्र
२०७६ चैतको पहिलो साताबाटै सिनेमा हल नखोल्न, चलचित्र सुटिङको काम नगर्न सरकारबाटै रोक लगाइएको थियो । २०७७ मंसिर अन्तिमबाट चलचित्र छायाङ्कन कार्य खुलेपछि २०७८ बैशाखको पहिलो सातासम्म ४१ वटा फिल्मले निर्माण अनुमति लिएका छन् । अनुमति लिएकाहरू मध्येमा राधा, चिसो मान्छे, सम्हालिन्छ कहिले मन, बोक्सीको घर लगायत फिल्मको छायाङ्कन सकिएको छ । धेरैले कोरोनाको दोस्रो लहरको त्रासले निर्माण कार्य केही समयलाई पछि सारेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण आफूले हाललाई छायाङ्कन स्थगित गरेको फिल्म ‘हिमानी’का निर्माता माधव वाग्लेले जनाए ।
हाल छायाङ्कन भइरहेको फिल्ममा हिँड्दा हिँड्दै, चुरीफुरी, तिम्रो मेरो साथ, द सेक्रेट अफ राधा, कौसिद, डिसेम्बर फल्स, तिम्रो मेरो साथ, गणपति लगायतका फिल्म छन् । योसँगै अन्य केही फिल्मका छायाङ्कन कार्य पनि अहिले गुपचुप रूपमा भइरहेको छ ।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीका अनुसार प्रायः निर्माताहरू केही समय पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । परिस्थिति बिग्रिँदै गयो भने निर्माण कार्य अझै पर सार्नुपर्ने स्थिति छ ।
जोखिम किन मोलियो ?
२०७८ सालको आगमनसँगै नयाँ वर्षदेखि परिस्थिति अलि सुधारिन्छ कि भन्ने अनुमान चलचित्रकर्मीहरूले गरेका थिए । कोरोनाको खोप पनि बनिसकेको हुनाले आशा पनि पलाएको थियो । त्यसैले चलचित्र निर्माणको जोखिम मोलेका थिए । तर, कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै आशा निराशामा परिणत भएको छ ।
अहिले सरकारले २५ जना भन्दा बढी भिडभाड नगर्नु भनेको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्दै चलचित्र निर्माण गर्छौं भनेर केही चलचित्रकर्मीहरू लागेका छन् तर उत्साह छैन । ८÷९ वटा सिनेमाले यो नयाँ वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने भनेर अनुमति लिएका थिए, तीमध्ये दुइटाले मात्र आफ्नो निर्माण कार्य सुचारु गर्न सकेका छन् ।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीका अनुसार प्रायः निर्माताहरू केही समय पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । परिस्थिति बिग्रिँदै गयो भने निर्माण कार्य अझै पर सार्नुपर्ने स्थिति छ । तर जोखिम कम भयो र सबैले कोरोना खोप लगाउन पाए भने भने चलचित्र निर्माणको काम रोकिदैन ।
शरीरको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । स्वस्थ भइयो भने मात्र अरु काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश बारम्बार चलचित्र निर्माता संघले दिइरहेको छ ।
‘सरकारले पनि केही निर्णय दिइसकेको छैन । हामीले मौखिक सल्लाह भने दिइरहेका छौं,’ अधिकारी भन्छन्, ‘लाखौं लगानीमा चलचित्र निर्माण गरेर प्रदर्शन हुन पाएन भने झन समस्या हुन सक्छ । शरीरको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । स्वस्थ भइयो भने मात्र अरु काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश बारम्बार चलचित्र निर्माता संघले दिइरहेको छ ।’
थोरै लगानी गरेर सानो बजेटका फिल्म निर्माण गरेर चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछु भन्नेहरूलाई रोक्दा त झन चलचित्र क्षेत्र पूरै संकटमा पुग्न सक्छ । त्यसैले, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर फिल्म निर्माण गर्नुस् भनेर संघले निर्माताहरूलाई अनुरोध गरेको छ । सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मात्र काम गर्न भनेको छ ।
#चलचित्र निर्माता संघ
#नेपाली फिल्म निर्माण